Umtya wokuNgcoba i-Coil, uMgca oNika iXesha lokuTyibilika, uNc Servo Coil uShishini abaNika iiNkqubela abaNika iiMveliso
Inkcazo:Umtya wokuNgcoba kweCoil,Umgaqo wokuxhasa ukunyuka kwamalahle,Iinkqubo zomtya wekhoyili,UNc Servo Cofa umgca wokutya,Umtya weCoil feeder,Ukuphatha iikhoyili kunye neMida yeFine
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Umtya wokuNgcoba kweCoil
Iintlobo zeMveliso ze- Umtya wokuNgcoba kweCoil , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Umtya wokuNgcoba kweCoil , Umgaqo wokuxhasa ukunyuka kwamalahle ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Coil Servo Straightener uMxhasi  Qhagamshelana Ngoku
INc Decoiler Straightener yeMxhasi  Qhagamshelana Ngoku
Ukushicilela Press 3 Kwizixhobo ezi-1 zoMxhasi  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi wesibonelelo esingu-3 kwi-1  Qhagamshelana Ngoku
Ukuphakama kwinqanaba lokutyisa  Qhagamshelana Ngoku
I-Decoiler Straightener NC Servo Isondli  Qhagamshelana Ngoku
Izixhobo zokondla i-Coil  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi we-Straightener engaqondakali  Qhagamshelana Ngoku
IMayflay Coil yokuNika iiLayini  Qhagamshelana Ngoku
I-Decoiler Straightener NC servo isondli somgca wephephandaba  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi weCompact Decoiler Straightener feeder  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi weServer Uncoiler Straigthener Nc Servo feeder  Qhagamshelana Ngoku
Umnxibelelanisi weOnline Server Isilumkisi nge-Straightener  Qhagamshelana Ngoku
I-3 kwi-1 ye-Servo yoMxhasi i-Straightener Cum Decoiler  Qhagamshelana Ngoku
INc Servo yoMxhasi oNika i-Uncoiler Straightener yeThala  Qhagamshelana Ngoku
Coil Servo Straightener uMxhasi
CO IL LENKONZO I-STRAI GHTENER FE EDER Coil Servo Straightener Okondlayo kwisakhiwo esikufutshane uyilo lwenzelwe ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu. Zikulungele...
INc Decoiler Straightener yeMxhasi
I-NC DECOI LER STRAIGHTENER FE EDER INc Decoiler Straightener Feer ekwi-space elifutshane yoyilo lwenzelwe ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu. Zikulungele...
Ukushicilela Press 3 Kwizixhobo ezi-1 zoMxhasi
Ukuhlukunyezwa PHAMBI SS 3 NGO-1 IMALI DER IZIXHOBO Ukuprinta i-Press 3 Ku-1 izixhobo ze-feeder zikwindawo emfutshane yoyilo lwenzelwe ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka...
Umxhasi wesibonelelo esingu-3 kwi-1
IMALI YOKUZIPHATHA EMVA KOKUGQIBELA 3 KWI-1 I-automation Feer 3 kwi-1 ikwindawo emfutshane yoyilo lwenzelwe ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu. Zikulungele...
Ukuphakama kwinqanaba lokutyisa
UNWI NDing LEVE LING IMALI ding Ukuphakama kwinqanaba lokutyisa kulwakhiwo lwendawo olufutshane lwenzelwe ngokukodwa ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu....
I-Decoiler Straightener NC Servo Isondli
UDECOI LER STRAIGHTENER NC SE RVO FEEDER I-Decoiler Straightener NC Servo feeder ikwindawo emfutshane yoyilo lwenzelwe ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu....
Izixhobo zokondla i-Coil
NTSIMBI CO IL FEED ING IZIXHOBO Izixhobo ze-Coil Feeding Equipment zikwindawo emfutshane yoyilo lwenzelwe ngokukodwa ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu....
Umxhasi we-Straightener engaqondakali
ISIQINISEKISO SESIQINISEKISO SESIHLOKO Isongezo se-Unwider Straightener sikwimodeli yendawo emfutshane eyenzelwe ukuba ihambelane neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu....
IMayflay Coil yokuNika iiLayini
Imayorla Coil yokuNgcoba iiLayini ezinomxholo oyicwecwe zikhethwa ukuba zisetyenziswe kwimeko yesithuba esincinci nje esikhoyo kunye kwimeko yecala lekhoyili elingathathi ntweni. Ngokwesiqhelo zisetyenziswa ekuphakamiseni ubungakanani obuphakathi...
I-Decoiler Straightener NC servo isondli somgca wephephandaba
Umxhasi we-Decoiler Straightener NC servo Okondla umgca wephephandaba yenziwe yunithi ye- Decoiler Straightener yunithi kunye ne-NC servo feeder iyunithi kwaye zilungele ngokukodwa Ifanelekile kwiprofayili, ukugxininisa ukugqobhoza umgca , ukusika...
ICompact Decoiler Straightener feeder ke ngoko ziyakwazi ukusebenza ngobukhulu ukusuka kwi-0.4 mm ukuya kwi-4,5 mm ngobubanzi obuqala ukusuka kwi-70 kuye kwi-1300mm kunye nobunzima ukuya kuthi ga kwi-10tons kuxhomekeka kwiimfuno zomthengi othile....
UNc Roller Okondla oMatshini oNgcolileyo we-Uncoiler o-3 Ku-1 kumgca wokuveliswa kweenqwelomoya. Ukuqulunqwa komda weCrafact Press Line njengasezantsi: Isixhobo sohlengahlengiso lwegiya lokulinganisa ububanzi bezinto Amavili esandla esolulekileyo...
Umnxibelelanisi weOnline Server Isilumkisi nge-Straightener
Umnxibelelanisi weOnline Server Umnikezeli nge-Straightener kukukwazi ukuqhubekekisa izinto nokuba ziphezulu okanye ziphantsi zivela kwi-uncoiler ukuze zikwazi ukwenza imisebenzi emininzi. Oluzenzekelayo Press Line Servo uMondli Nge Straightener...
I-3 kwi-1 ye-Servo yoMxhasi i-Straightener Cum Decoiler
Umsebenzi we- 3 kwi-1 servo feeder ngqoener cum Decoiler 1 . Ukuchaneka okuphezulu: +/- 0.1mm. 2. Gcina indawo yezityalo. 3. IJapan servo motor, PLC kunye nelinye icandelo lombane s, ixesha elide lisebenzisa ixesha. 4. Ukusebenza ngokulula,...
INc Servo yoMxhasi oNika i-Uncoiler Straightener yeThala
Imigca yeCoil Coact eyenziweyo yenzelwe ngokukodwa ukuphatha i-coil stock kwindawo yokugcina inyawo. Umgca wecoil wecompact ubandakanya i-uncoiler yeemoto, i- servo elawulwa ngqo i- ngqoener & feeder kunye nenqwelomoya yokuzilayisha ekhethiweyo...
KwiChina Umtya wokuNgcoba kweCoil Abaxhasi
Xa usebenza ngesitokhwe esindayo okanye indawo encinci, imigca yokondla i-Coil ibonelela ngezisombululo zokuvelisa, zokugcina iindleko zekhoyili . Ukudibanisa ngqo kunye nokondla kwenza ngamanye amaxesha loop ende phakathi kweSraightener kunye neServo Roll feed .
Umtya weCoil Coil unikezela kubathengi uluhlu olupheleleyo lwemveliso phantse kuzo zonke iinkqubo ngaphakathi kokufakwa kwesinyithi yentsimbi kunye nomzi mveliso wokwenza isinyithi, ezinje ngeebhuleki zentsimbi, intsika yangaphambili, Uloliwe wesitulo esixhonyiweyo, intsika yeziko, ivili lokujikeleza njalo njalo.
Kwiinkqubo zethu cinezela lweehagu unako ukusebenza ububanzi izinto coil ukusuka 400mm ukuya 1300mm, coil okusuka 0.4-4.5mm, ubunzima coil ukuya 10000kgs.
Uluhlu lweemveliso zethu luqonda imigca yokutya egcwele kwikholeji eqhelekileyo kunye noyilo lwe compact, yokondla kwezinto zekhoyili koomatshini bokushicilela kunye nemigca yokufaka profiling.
Umtya wokuNgcoba kweCoil Umgaqo wokuxhasa ukunyuka kwamalahle Iinkqubo zomtya wekhoyili UNc Servo Cofa umgca wokutya Umtya weCoil feeder Ukuphatha iikhoyili kunye neMida yeFine Umtya wokutya weCoil Umgca wokuGqibelela kweCoil